Isikhokelo kubarhwebi malunga neLungelo lobuNini beNgqondo (IP) | Martech Zone
Ukuthengisa yinto eqhubekayo. Nokuba ulishishini okanye ishishini elincinci, ukuthengisa yeyona ndlela ibalulekileyo yokugcina amashishini eqhuba kunye nokunceda ukuqhuba amashishini aye empumelelweni. Ke kubalulekile ukuba ukhusele kwaye ugcine igama lophawu lwakho ukuze umisele ukuhambisa kakuhle umkhankaso wentengiso kwishishini lakho.
Kodwa ngaphambi kokuza nephulo lokuthengisa elicwangcisiweyo, abathengisi kufuneka baliqonde ngokupheleleyo ixabiso kunye nokusikelwa umda kophawu lwabo. Abanye abantu badla ngokungakuboni ukubaluleka kwe amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kwimikhankaso yabo yokuthengisa. Ukwazi konke kakuhle ukuba amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda anokubonelela ngesiseko esihle kwi-brand okanye kwimveliso, sixoxe ngezinye zezibonelelo kunye nezibonelelo zayo.
IPropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda yiLungelo lakho loKhuphiswano
Amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda afana nelungelo elilodwa lomenzi kunye nokukhusela uphawu lwentengiso kuvumela abathengisi ukuba bazise ngokulula iimveliso zabo eluntwini.
Abathengisi sele benayo into enye ukuba imveliso yabo inelungelo elilodwa lomenzi wechiza. Ukusukela ukuba ukhuselo patent inika amashishini ilungelo lokususa iimveliso ezifanayo kwimarike, oko kwenza kakhulu umsebenzi wabathengisi ungabi nzima. Banokujolisa ngokulula ukuza ne iqhinga lokuthengisa elisebenzayo ngendlela yokwazisa imveliso yabo kwintengiso, kwaye ungakhathazeki ngokudlula okanye ukubetha abo bakhuphisana nabo.
Ukhuseleko lwentengiso, kwelinye icala, iyaxhasa kwaye inika isiseko kwiphulo lokuthengisa. Inika amashishini ilungelo elikhethekileyo ngaphezulu kwelogo, igama, isilogeni, uyilo, njalo njalo. Uphawu lwentengiso lukhusela igama kunye nomfanekiso wophawu lwakho ngokuthintela abanye ekuxhaphazeni uphawu lwakho. Inqaku linokuchonga abathengi ukuba babone imveliso yakho kwintengiso. Ngokukhusela uphawu lwentengiso kwindawo yakho, unokuqiniseka ukuba nokuba wenza liphi iphulo lokuthengisa okanye isicwangciso-nkqubo osenzayo, uluntu lufumana umyalezo ohambelana nomgangatho weemveliso zakho kwintengiso.
Njengomzekelo, umvelisi wokuqala webhetri akunyanzelekanga ukuba abe noxanduva lwebhetri exelileyo eqhume. Nangona kunjalo, abathengi banokungakwazi ukubona ukuba ibhetri iyalingiswa kuba ilogo yakho inokubonwa kwimveliso. Nje ukuba umthengi abe namava amabi ngemveliso, iya kuthi ichaphazele isigqibo sabo sokuthenga kwaye baphethukele kolunye uphawu kwezinye iindlela. Ke ayithethi ngaphandle kwelungelo elilodwa lomenzi kunye nokhuseleko lwentengiso yenye yezinto eziyimfuneko kwiphulo lokuthengisa elinempumelelo.
Phanda iLungelo leNgqondo yaBakhuphiswano bakho
Abathengisi kufuneka bazi ukuba amashishini kufuneka enze ilungelo lobunikazi okanye uphawu lwentengiso ngaphambi kokufaka isicelo selungelo elilodwa lomenzi okanye uphawu lwentengiso kwi-United States Patent nakwi-Ofisi yoRhwebo (USPTO). Ngeli nqanaba, abathengisi kufuneka babandakanyeke kuba iziphumo zepatent okanye uphawu lokuthengisa zinokuvelisa ulwazi olubalulekileyo olunokusetyenziselwa ukwenza isicwangciso esisebenzayo sokuthengisa. Ulwazi olukhoyo esidlangalaleni malunga nepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda sisixhobo esisebenzayo sokuthengisa esinokusetyenziselwa ukukhangela abanokukhuphisana nabo.
Kuba isicelo selungelo elilodwa lomenzi sihlala sifakwa ngamashishini orhwebo, unokukhangela ngokulula amashishini avelisa iimveliso ezinxulumene noko okanye ezifanayo kuwe. Ngokwenza njalo, uya kuba nakho ukwazi ukubanakho kunye nokusikelwa umda kwemveliso yakho kwintengiso ngaphambi kokuba uqale nokuyikhankasela.
Ukuba nokuqonda kokwenza ukhangelo lwe-patent kubalulekile ukuba urhwebo kwishishini ukuya kwishishini ngokunjalo. Uyakwazi ukuchonga amashishini okanye iinkampani ezinokuxhamla kwiimveliso zakho. Umzekelo, ukuba ukwishishini elivelisa imicroscope ye-elektroniki, uya kuba nakho ukukhangela ezinye iinkampani ezinxulumene nelo candelo lomsebenzi.
Iziphumo zophando lobunikazi oluhambisanayo kunye nembono yezomthetho evela kwiGqwetha lobunikazi yile nto kanye umenzi kunye nomnini weshishini / usomashishini ekufuneka eyifumene (kwaye eyiqonda ngokupheleleyo) ngaphambi kokuqhubela phambili noyilo lwabo.
JD Houvener we Amalungelo awodwa omenzi wechiza eBold
Khusela ukuthotyelwa kwee-IP
Kubalulekile ukuba wazi ezinye zeziseko zomthetho wepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ngaphambi kokuba uthengise imveliso yakho ngeenjongo zorhwebo. Ngokwenza njalo, uya kuba nakho ukunqanda ukubuyela umva kweshishini kunye neetyala ezibiza kakhulu ezinxulumene nokophulwa komthetho.
Malunga nelungelo lokushicilela, uninzi lwabathengisi belusele luzazi iintambo kunye nobungakanani bomthetho welungelo lokushicilela xa kufikwa kwizinto zokuthengisa. Usebenzisa imifanekiso, iividiyo, isandi, umculo, njl.njl kuGoogle okanye ukukhangela kwenye injini yokukhangela kunokubeka ishishini lakho emngciphekweni. Ke ngoko, kuya kufuneka uqiniseke ukuba imisebenzi oyilayo oyisebenzisela izinto zakho zentengiso ikhululekile kwilungelo lokushicilela okanye umyili / umbhali womsebenzi uyakuvumela ukuba uyisebenzisele iinjongo zorhwebo. Ngale ndlela, unokuthintela ukwaphulwa komthetho kunye nemirhumo ebiza amatyala.
Ngokumalunga nelungelo elilodwa lomenzi okanye uphawu lwentengiso, ukwazi inkqubo yokujonga ngokubanzi kunokunceda abathengisi baphephe ulwaphulo mthetho. Kuba isicelo kunye nenkqubo yolondolozo kunokuba nzima, abanini bamashishini bahlala beqesha uphawu lwentengiso okanye igqwetha lamalungelo abenzi ukubanceda. Kwelo nqaku, abathengisi njengawe kufuneka ubandakanyeke kwaye uyikhumbule le nkqubo ukuze ube nokuza nesicwangciso esiliqili sentengiso esingazukubeka ishishini lakho emngciphekweni.
Bhuka i-IP yokubonisana Simahla
tags: isibindi ipcopyrightulwaphulo-mthethoi-intellectual propertyamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqondaip umthethoJD HouvenerJD HouvenerumthethozomthethopatentUkophulwa kwelungelo elilodwa lomenzi wechizauphawu